Martus(tm) ဆော့ဖ်ဝဲ ဗားရှင်း ၄.၃ (Version 4.3) ဖတ်ပါ README_bur.txt
Martus ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းးအချက်အလက်များအတွက် http://www.martus.org ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Martus ဆော့ဖ်ဝဲ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ညွှန်ကြားချက်များအတွက် Martus သုံးစွဲသူလက်စွဲကို ကြည့်ရှုပါ။
လက်ရှိဘာသာပြန်ထားသောအသုံးပြုသူ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအပြင် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ထားသောယခင်ဗားရှင်းများ၏မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအားလုံးအတွက်
http://www.martus.org/downloads/ သို့ သွားပါ။
ဗားရှင်း နှင့် ထုတ်ပြန်မှု ရက်စွဲ အလိုက် Martus ထုတ်ပြန်မှု အချက်အလက်များ-
ဗားရှင်း ၄.၃ (Version 4.3) 2013-08
https://www.martus.org ဆော့ဖ်ဝဲ ဒေါင်းလုဒ် စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း ယခုဖြန့်ချိမှုကို အင်္ဂလိပ် နှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ အနာဂါတ်တွင် (https://www.martus.org/downloads) တွင် စာရွက်စာတမ်းစာမျက်နှာမှာ ဘာသာစကားအထုပ်များအဖြစ် အခြား ဘာသာစကားများ အတွက်ပါ ရရှိလာပါမည်။
သင်သည် Martus ၏ ယခင် ဗါးရှင်း တခုမှ လက်ရှိ ဗါးရှင်း 4.3 ဆီကို အဆင့်မြှင့်မရနိုင်ပါ။ သင်သည်သင်၏
Martus ဗါးရှင်းဟောင်းကို ဖြုတ်ရန်လိုပါမည် (Start > Programs > Martus > Uninstall Martus ကိုဖြစ်စေ၊
Control Panel ထဲမှာ Add/Remove Programs ကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သည်) ။ အကယ်၍ သင်သည် Windows Vista သို့မဟုတ် Windows7ကို အသုံးပြုနေကာ Start မီနူ ထဲတွင် Martus ရှော့ကပ် ရှိနေလျှင်၊ သင်သည် Start > Programs ဆီကိုသွားပြီး Martus အုပ်စုကို ညာဖက်နှိပ်ကာ "Delete"ကို ရွေးလိုကခြင်းဖြင့် Martus အုပ်စုတခုလုံးကို ဖျက်ရန်လိုမည်။ ထိုသို့မလုပ်လျှင်၊ သင်က Martus 4.3 ကိုဖြုတ်သည့်အခါမှာ ထိုလင့်ခ်များ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြမည်ဖြစ်ရာ လုံခြုံရေးအတွက် ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်သည်။
1) Martus ထဲကို Subgraph ကပြုစုပေးခဲ့သည့် Orchid ဆော့ဖ်ဝဲမှတဆင့် Tor ကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။ သင်သည် Martus ထဲမှာ ရွေးချယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများ (Options)> စိတ်ကြိုက်အနေအထားများ (Preferences) ကိုသွားပြီး Tor ကို ဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ Tor က လုံခြုံမှုကို မြှင့်ပေးနိုင်သော်လည်း စာစောင်များ ပို့မှုကို နှေးလာစေနိုင်သည်။ သင်သည် Tor အကြောင်းကို https://www.torproject.org/ မှာပိုပြီး လေ့လာနိုင်သည်။
2) Windows အင်စတော်လာ ထဲတွင် ယခု Java7ပါဝင်နေသောကြောင့် Martus သည် အခြား နည်းစနစ်များ (Linux ထဲက OpenJDK7အပါအဝင်) ထဲတွင်ပါ Java7ကို အသုံးပြုသွားမည်။
3) သင်က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည်ဆိုလျှင် ပင်မများ၏ အများဆိုင်နှင့်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းစဉ် ကို သို့မဟုတ် အဖွဲ့ခွဲ မှတ်တမ်းများကို အပြည့်အဝ ကြည့်ရှုခွင့်ကို ထည့်ပေးထားရာ သင်သည် ယင်း မှတ်တမ်းပိုင်ရှင်များနှင့် စစ်ဆေးကြည့်လျက် သင်ရထားသည့် အချက်အလက်မှန်မမှန်ကို သိလာနိုင်မည်။
4) Martus အုပ်စုကို Windows7နှင့် Vista ထဲက Start မီနူး ထဲတွင် ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် မွမ်းမံ အင်စတော်လာကို ထည့်ထား။
1) စာတွဲ/ဖွင့် နှင့် စာတွဲ/သိမ်းဆည်း လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာပြဿနာအများအပြားကို ပြင်ပေးထားရာ စာတွဲ အမည်များ ဖယ်ရှားမည့် နေရာများ သို့မဟုတ် အခြားစာတွဲစုများသို့ သွားလာရာတွင် ၄င်းတို့ထဲကို Extension များထည့်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
2) Martus မှတ်တမ်း လမ်းညွှန်ကို ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းမည့် မူလ စာတွဲစုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ (လိုချင်လျှင် သင်သည် အခြားနေရာမှာပါ သိမ်းဆည်းရန် ရွေးခွင့်လည်း ရှိပါသည်)။
3) Martus မှတ်တမ်း လမ်းညွှန်ထဲတွင် အမြဲတမ်း သိမ်းဆည်းမှုအစား အခြား Martus မှတ်တမ်းများနှင့် အများဆိုင် သတင်းအချက်အလက်ဖိုင်များ (.mpi) ကို လုံခြုံစွာ ဝေမျှပေးနိုင်ရေး အတွက် တင်ပို့စာတွဲများ သင်ထားရှိလိုသည့် နေရာကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါသည်။
4) သင်၏ သော့ကို မိတ္တူကူးသိမ်းရာမှာ ဖန်သားပြင် အမှားအတွက် ရှင်းလင်းချက်ကိုထည့်ပေးထားသည်။
5) သင်က စာတွဲများကို တင်ပေးသည့် နေရာတစ်ခုစီအတွက် ဖီလ်တာများကို ထည့်ပေးထားရာ စာတွဲအညွှန်းထဲမှာ မှန်ကန်သည့် စာတွဲပုံစံကိုသာ ပြသပေးမည် (ဥပမာ၊ .mpi စာတွဲများ)။
6) စီစစ်ခြင်း မလုပ်ရသေးသည့် အဖွဲ့ခွဲအညွှန်း၏ အဝါရောင်မှ ခွဲခြားနိုင်စေရန်အတွက် စာစောင်ထဲက စိစစ်ပြီး အဖွဲ့ခွဲအညွှန်းများ၏ အရောင်ကို အစီမ်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။
7) မှတ်တမ်း တစ်ခုကို ကနဦး ဖန်တီးရာတွင် ရောထွေးစရာ ဖြစ်ခဲ့သည့် "အဖွဲ့များ စာရင်း" ဒိုင်ယာလော့ကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
8) စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်ရေး အမှားကုဒ်ပြ ဖန်သားပြင်ထဲကို လှိမ့်ဆင်းဘားကို ထည့်ပေးလိုက်ရာ သေးငယ်သည့် ဖန်သားပြင် ပေါ်မှာ ကြည့်ရတာ ပိုလွယ်လာပါသည်။
1) မြန်မာဘာသာဖြင့် အရာအများအပြားတို့အား ပြသမှုကို ပြင်ပေးခဲ့သည်၊ "တင်ပို့ တန်ဖိုးများ" ကဏ္ဍခေါင်းစီးများ နှင့် စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်ခဲ့သည်။
2) ဘာသာပြန်ပေးကြသူတို့အတွက် Martus ဘာသာပြန် ဖိုင (.mtf) ထဲကို ညွှန်ကြားချက်များကို ထပ်ပြီးထည့်ခဲ့သည်။
3) ရုရှား၊ အာရပ်၊ ဖါရစီ နှင့် ထိုင်း ဘာသာအတွက် Windows အင်စတော်လာ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာထဲက ဖွန့် ပြသမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
4) Windows OS အတွက် မည်သည့် ဘာသာစကားကို ရွေးထားစေကာမူ ယခုတော့ သင်သည် Martus ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့်မဆို တပ်ဆင်၍ ရလာပြီ ဖြစ်ကာ ၄င်းကို မှန်ကန်စွာ ပြသပေးမည်။
5) Windows အင်စတော်လာ အတွက်ခမာဘာသာပြန်ကို ထည့်ပေးထားသည်။
- Martus လိုဂိုကို အသစ်ဆီ မြှင့်တင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
- သုံးစွဲသူ ဖန်သားပြင်များဆိုင်ရာ အခြားသော အသေးစား ဘာဂ်များ၊ ရှင်းလင်းချက်များ နှင့် ရှင်းပစ်မှုများကို ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ဗားရှင်း ၄.၂ (Version 4.2) 2013-04
- စွမ်းဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း - ဖန်သားပြင်ကို ပြန်လည်ရယူမှုအတွက် တင်သွင်းမှုနှုန်း သိသိသာသာမြင့်မားလာခဲ့သည်။
- မြန်မာ ဖွန့် မွမ်းမံမှုများ - Martus ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖွင့်လျှင် ဒေတာထည့်သွင်းမှု နှင့် ပြသမှုကို အများသုံး ဇော်ဂျီဖွန့်ဖြင့် အလိုအလျောက် လုပ်နိုင်ပါပြီ။ အကယ်၍ သင်သည် Martus ကို မြန်မာဘာသာနှင့် ဖွင့်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း သင်က မြန်မာဒေတာကို တိုက်ရိုက်လိုသည် သို့မဟုတ် သင်၏ စာစောင် နေရာမှာ ကြည့်ရှုလိုပါက၊ ရွေးချယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများ (Options) > စိတ်ကြိုက်အနေအထားများ (Preferences)ကို ရွေးလိုက်ပြီး နောက်မှာ "မြန်မာလို ပြသရေး နှင့် ရိုက်ထည့်ရေး အတွက် ဇော်ဂျီဖွန့်ကို သုံးပါ" အကွက်ကို ရွေးပါ။ Martus တပ်ဆင်ရေးထဲကို ဇော်ဂျီဖွန့်ကို ထည့်ပေါင်း ပေးထားသည်။
- လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုများ - ၁) မှတ်တမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဆာဗာမှာ သုံး/ရယူရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် စာရွက်စာတမ်းများထဲမှာ ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းချက်များကို ထည့်ပေးခဲ့သည်၊ ၂) မှတ်တမ်း အသစ်များအတွက် RSA သော့ ပမာဏကို တိုးပေးခဲ့သည်၊ ၃) မိတ္တူကူး အရန်သိမ်းဆည်းမှုကို "ဝေမျှ" ရေး မာလ်တီဖိုင်သော့ကို ဖန်တီးရာမှာ အသုံးပြုသည့် ကျပန်း ကိန်းဂဏန်း ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည် (အကယ်၍ သင့်ဆီမှာ ဖန်တီးပြီးသား မာလ်တီဖိုင်သော့ ရှိနေလျှင် နည်းအသစ်ကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည် ဖန်တီးရန် သင့်ကို တောင်းဆိုလိမ့်မည်)၊ ၄) အဖွဲ့ခွဲ အတည်ပြုရေး ယန္တရားကို ထည့်ပေးထားရာ၊ အကယ်၍ သင့်ထံသို့
(ပင်မ မှတ်တမ်းအဖြစ်) စာစောင် တစ်ခုကို သင်က မစစ်ဆေးရသောအဖွဲ့ခွဲ တစ်ခုထံမှ နေပြီး ပို့လာခဲ့သော် သင့်ကို သတိပေးလာမည်၊ ၅) သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန်ထဲမှာ Martus ကို Tor နှင့် TAILS (စတင် ဖွင့်၍ ရနိုင်သော/USB အရှင်) နှင့်အတူ ပိုပြီး လုံခြုံစွာ ဖွင့်သုံးရေး (သင်၏ ဒေတာများကို ဆာဗာထံသို့ ပို့ရာတွင် မှတ်မိမှု ခက်ခဲစေရေးအတွက်) လမ်းညွှန်ချက်များကို ထပ်ထည့်ပေးခဲ့သည်။
- မွမ်းမံပြီး ဘာသာပြန်မှုများ- စပိန် နှင့် မြန်မာ ဆော့ဖ်ဝဲ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို 4.1 ထဲက အင်္ဂါရပ်အသစ်များကို (ကားချပ်များ၊ သတ်ပုံစစ်ဆေးခြင်း) ထည့်ပေ့းရန် မွမ်းမံပေးခဲ့သည်။
- BouncyCastle နှင့် XMLRPC ကို နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဆီကို မွမ်းမံပေးခဲ့သည်။
- Martus ကို Mac dmg ဖိုင်တစ်ခုမှ တိုက်ရိုက် ဖွင့်စဉ် အစီရင်ခံစာများနှင့် အခြားဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ရှိခဲ့သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
- ကားချပ်များကို ဖန်တီးရေး အကွက်များထဲက စာ အကွက်များကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။
- Windows မှာ Martus တပ်ဆင်မှုထဲတွင် အာမေနီယံဖွန့်ကို ထည့်ပေးလျက် မွမ်းမံပေးခဲ့သည်။
- Java မွမ်းမံမှုများ - Windows တပ်ဆင်မှုကို နောက်ဆုံး ဗါးရှင်း Java6 ပါဝင်လာအောင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ Martus ကို Tails နှင့်အတူ (သုံးစွဲသူ လက်စွဲ မေးနေကျမေးခွန်းများ FAQကို ကြည့်) ကိုဖွင့်သုံးရန် အသုံးပြုရသည့် OpenJDK (6 သို့မဟုတ် 7) ကို ဖွင့်သုံးနိုင်အောင် Linux ကိုပါ မွမ်းမံပေးခဲ့သည်။
- ဖန်သားပြင်များဆိုင်ရာ အခြားသော အသေးစား ဘာဂ်များ၊ ရှင်းလင်းချက်များ နှင့် ရှင်းပစ်မှုများကို ထည့်သွင်းလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ဗားရှင်း ၄့ ၁့ ၁ (Version 4.1.1) 2012-08 (၂၀၁၂-၀၈)
- အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သည့်ဘာသာစကားများဖြင့် Martus 4.1 (၄.၁) ကိုသုံးသည့်အခါ ဇယားများနှင့် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်ဆေးသည့် အဘိဓာန်
စာမျက်နှာများတွင် အစစာလုံးများကို ဖြတ်တောက်လိုက်သည့် ပြဿနာကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
- 4.0 (၄့ ဝ) မြန်မာနှင့် အာမီးနီးယန်း ဘာသာပြန် မွမ်းမံဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
ဗားရှင်း ၄့ ၁ (Version 4.1) 2012-07 (၂၀၁၂-၀၇)
- အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာစောင်များရှိ စာသားများအတွက် ရှေးဦးစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်ထားပါသည်။ စာစောင်တစ်ခုကို
တည်းဖြတ်သည့်အခါ မှားယွင်းသည့်စာလုံးပေါင်းများကို အနီရောင်မျဉ်းသားထားပြီး ထိုစကားလုံးတွင် ညာခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အကြံပြုထားချက်များ
ကြည့်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏အဘိဓာန်သို့ ထည့်လိုက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကြီးများနှင့်သာ ရေးထားသည့်စာလုံးများ သို့မဟုတ်
ကိန်းဂဏန်းများပါသည့်စာလုံးများကို စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်သည့် အရာက လစ်လျူရှုမည်ဆိုသည်ကို မှတ်သားပါ။ ဤဗားရှင်းရှိ
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်သည့်အရာက ဆောင်းပါးပြင်ပရှိ အပိုင်းများ (ဥပမာ၊ အဆက်အသွယ်လုပ်ရန် အချက်အလက်၊ HQ တံဆိပ်များ၊ ဖိုဒါအမည်များ)
စစ်ဆေးမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် စာစောင်များက (Edit) တည်းဖြတ်သည့် အနေအထားတွင်ရှိနေမှသာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ စစ်သည့်အရာက
မှားယွင်းသည့်စာလုံးပေါင်းများကို ပြမည်ဆိုသည်ကို မှတ်သားပါ (View) ကြည့်သည့်အနေအထားတွင် ၄င်းတို့ကို မပြပါ)။
(Grid) အကွက်များရှိစာသားများတွင် စာလုံးပေါင်းမှားနေသည့် စကားလုံးများအတွက် (သင်ကတည်းဖြတ်နေသကဲ့သို့) ထိုဆဲလ်အကွက်ထဲသို့
ဘယ်ခလုတ်နှိပ်ပြီးမှ အကြံပြုချက်များကြည့်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏အဘိဓာန်တွင်ထည့်ရန်အတွက် မီနူးပေါ်လာရန် ညာခလုတ်နှိပ်ရပါမည်။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်သည့် အဘိဓာန်ကို ကြည့်ပြီး ဆန္ဒရှိပါက ရွေးချယ်ချက်များ (Options) > စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်း (Spell Checking)
မီနူးတွင် စကားလုံးများ ထည့်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများလည်းလုပ်နိုင်ပါသည်။
- ရှေးဦးဇယား လုပ်ဆောင်ချက် ထည့်ထားပါသည် - သင်၏ စာစောင်တစ်ခုခုတွင် ဖော်ပြနေသည့် Martus စာစောင်အပိုင်းတစ်ခုတွင်
ဘားဇယား၊ (bar chart) သုံးဘက်မြင်ဘားဇယား၊ (3d bar chart) စက်ဝိုင်းဇယားများ (pie chart) (%s ပြသည့်) ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သင်ဇယားကို ဖန်တီးစဉ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ရှာဖွေရန်အပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် Martus စာစောင်များကို ဇယားများက ရေတွက်သည်ကို မှတ်သားပါ။
အစီရင်ခံစာတွင် သင်၏ကွန်ပျူတာရှိ စာစောင်တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှ အချက်အလက်များကိုသာ Martus က ဖော်ပြကြောင်းနှင့် ဇယားများရှိ
အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်နှင့် ရေးထားမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးချက်တွေ့မည် (ထို့ကြောင့် ဤဇယားကို ပုံနှိပ်ထားသည့်ပုံစံ သို့မဟုတ်
အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံစံနှင့် တွေ့သူမည်သူမဆို အချက်အလက်အားလုံးကို ဖတ်နိုင်မည်) ဆိုသည်ကို မှတ်သားပါ။
- Martus ဝက်ဆိုက်တွင် Martus အသုံးပြုခြင်း၊ (Windows နှင့် Mac တွင်) Martus ထည့်သွင်းခြင်း၊ (Windows နှင့် Mac တွင်)
Martus တွင် ပြဿနာ အဖြေရှာခြင်း စသည့် ရှေးဦး Martus သင်ကြားရေး ဗီဒီယိုများ ထည့်ထားပါသည်။
- Martus စာစောင်များ၏ ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး၏ XML တင်ပို့မှု အာလ်ဖာ စမ်းသပ်အကောင်အထည်ဖော်မှု ထည့်ထားသည်။ ဤလက္ခဏာမှာ
အပြည့်အဝမပြီးသေးသော်လည်း မိမိတို့၏ ဗားရှင်းသမိုင်းများအားလုံးကို အခြားကိရိယာများသို့ တင်ပို့လိုသည့် အသုံးပြုသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါမည်။
Martus မှ တင်ပို့လိုက်သည့် XML ဖိုင်ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကို တင်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းလျှင် တင်ပို့လိုက်သည့် စာစောင်များမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ
ဆက်စပ်ခြင်းမရှိဘဲ ယခင်ရေးသားသူနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များလည်း ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဤလက္ခဏာကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန် Martus
အမိန့်ပေးသည့် (command) လိုင်းတွင် “ --alpha-tester” (အယ်လ်ဖာ-စမ်းသပ်သည့်အရာ) ရွေးချယ်ချက် ထည့်ရမည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဗားရှင်း ၄့ ၁ Martus သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန် “၁၁။ မေးနေကျ မေးခွန်းများ” (FAQ) အပိုင်းမှ နံပါတ် ၅၀
(ကျွန်ုပ်၏စာစောင်များ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းထက်ပိုပြီး XML သို့ တင်ပို့နိုင်မည်လား) ကိုကြည့်ပါ။
- စာစောင်ဘာသာစကားစာရင်းတွင် အာမီးနီးယန်း ဘာသာစကား ထည့်ထားပြီး ထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာများတွင် Martus မှ အသုံးပြုရန် အာမီးနီယန်းယူနီကုတ်ဖွန့်
- စိတ်ကြိုက်ဆဲလ်အကွက်များအတွက် ညာခလုတ်နှိပ်ပြီး (Cut) ဖြတ်တောက်ခြင်း/(Copy) မိတ္တူကူးခြင်း /(Paste) စာလုံးပြန်ချခြင်း/(Delete) ဖျက်ခြင်း
/(Select All) အားလုံးရွေးချယ်ခြင်း မီနူးများ။
- အခြားသေးငယ်သည့် အမှားအယွင်းများ၊ ရှင်းပြချက်များနှင့် သုံးစွဲသူဖန်သားမျက်နှာပြင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်ခြင်းအမျိုးမျိုး။
ဗားရှင်း ၄.၀ (Version 4.0) 2012-05 (၂၀၁၂-၀၅)
ယခုဖြန့်ချိမှုကို ဆော့ဖ်ဝဲ download စာမျက်နှာ https://www.martus.org တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အင်္ဂလိပ်၊
ဖာဆီ/ဒါရီ၊ စပိန်၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားဘာသာစကားများအတွက် မှတ်တမ်းစာမျက်နှာ
(https://www.martus.org/downloads) ပေါ်ရှိ ဘာသာစကားစုတွင်တွေ့ရသည့် အတိုင်း မကြာခင် ရရှိနိုင်မည်
- Java6 (တခါတရံ ၁.၆ ဟုခေါ်သည်) နောက်ဆုံးအခြေအနေ။ Java6 သည် အချို့နေရာများတွင် လုပ်ဆောင်မှု
ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်သည်။ များစွာသောဘာသာစကားများအတွက်လည်း စာလုံးရုပ်ထွက်ပိုကောင်းလာမည် (ဥပမာ - ခမဲ၊ ဖာဆီ/ဒါရီ)။
မှန်ကန်သော စာလုံးစာလုံးရုပ်ထွက်အတွက် အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရမှုအနည်းငယ်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည် (ဥပမာ -
မြန်မာ၊ ခမဲ၊ နီပေါ)။ Windows အင်စတော်လာများတွင် Java6 သည် အလိုအလျောက် ပါဝင်ပြီး၊ Mac/Linux တို့တွင်
Java 1.6.0_30 သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းကျသော versions များဖြစ်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ရမည်။ ရှေးကျသော
Java6 versions များသည် Martus ၏လုပ်ဆောင်မှု ကိုမမှန်မကန် ဖြစ်စေတတ်သည်။ သင့်၏ Mac/Linux တွင်
မည်သည့် Java version ရှိနေသည်ကို terminal window အားဖွင့်ပြီး java-version ဟုရိုက်ထည့်ကာ
အန်းတား/ရိတန်း (enter/return) ခလုတ်နှိပ် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
- ဘူလက်တင်(Bulletin) အများအပြား သို့မဟုတ် ကြီးမားသောဘူလက်တင်များရှိသည့် အကောင့်များအတွက် Martus
လုပ်ဆောင်မှု ပိုမိုချောမွေ့စေရန် “memory switches” ကို Windows နှင့် Mac ရှော့ကပ်တို့တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
လိုအပ်ပါက အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မန်မိုရီ (Memory) ကို တိုးနိုင်သေးသည်။ သို့သော် ယခင်က ကိုယ်တိုင်တီထွင်ရန် လိုအပ်သော
- Windows တွင် Martus အသုံးပြုသူ၏ အင်တာဖေ့စ်ပုံထွက်ကို အားကောင်းစေသည်။ မူလစနစ်ဖြစ်သည့်
"look and feel" ကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။
- အစောပိုင်း Windows နှင့် Java versions တို့တွင်တွေ့ရှိရသော လုံခြုံမှုအခြေအနေတို့ကြောင့် Martus 4.0 သည်
Windows 98 (ME, 2K, XP, 2003, Vista, 7) တို့ထက် ပိုနောက်ကျသော versions များတွင်သာ
လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ရှိသည်မှာ Windows98/NT သို့မဟုတ် ယင်းထက်ရှေးကျပါက Martus 3.6.2
သို့မဟုတ် ယင်းထက်ရှေးကျသောအရာကို သုံးဖို့လိုသည်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ပါက ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော Windows version ကို
အဆင့်မြှင့်ရန် အလေးအနက် အကြံပြုပါသည်။
- အသုံးပြုသူများတင်ပြလာသော ပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်း၊ ဒီဘပ်ဂ် လုပ်ခြင်းများ (Debugging) ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Martus
console log အတွက် ထပ်ဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းထားသည်။ ထည့်သွင်းထားသော
သတင်းအချက်အလက်များတွင် အကောင့်တစ်ခုအတွက် Martus public code နှင့် လက်ရှိမန်မိုရီနှင့် ပတ်သက်သော
- Martus ဖြန့်ချိမှု တည်ဆောက်ခြင်း (ဖန်တီးခြင်း) အတွက် (Windows, Mac နှင့် Linux အတွက်) နည်းစနစ်
အသစ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားသည်။ ယင်းသည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထိရောက်စွာအသုံးချခြင်းတို့ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး၊ များစွားသော
အခြားအတွင်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများလည်း ပါဝင်သည်။
ဗာရှင် 3.6.2 (၃.၆.၂) (2011-10 / ၂၀၁၁-၁၀)
ဤထုတ်ပြန်ချက်ကို http://www.martus.org ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အင်္ဂလိပ်၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊ စပိန်နှင့်
အခြားဘာသာစကားများဖြင့် တွေ.ရှိနိုင်သည်။ အခြား ဘာသာစကားများဖြင့် နောင်အနာဂါတ်တွင် ဘာသာစကားအတွဲများဖြင့်
http://www.martus.org/downloads မှတ်တမ်းတင် ထားသည့် စာမျက်နှာပေါ်တွင် တွေ.ရှိနိုင်မည်။
- အင်ထရီအစနှင့်အဆုံးရှိ ကွက်လပ်များမှာ ရှိကြသည့် ဆွဲချအကွက်များထဲ အင်ထရီကို ရှာဖွေသောအခါ တွေ့ရသော ပြသနာကို ဖြေရှင်းသည်။
- သင့်ကွန်ပျူတာ ဘူလတင်များတွင် မရှိတော့သော ယခင်သိမ်းထားသည့် ရှာဖွေမှုရလဒ်ကို ဆွဲတင်ရာတွင် တွေ့ရသော ပြသနာကို ဖြေရှင်းသည်။
သုံးသူအားရှာခွင့်မပြုသော မှားယွင်းမှုသတိပေးချက်အစား၊ ရှာဖွေခွင်အတွင်း ကွက်လပ်များကို ဒီဖော့လ်/ရှာဖွေမှု တန်ဘိုးအသစ် သို့ပြန်ပြောင်းပို့မည်
(ဆိုလိုသည်မှာ၊ “မည်သည့်ကွက်လပ်မဆို ပါဝင်မည်”) သို့ပြန်ပြီး ရီဆက်ပြုလုပ်မည်။
တင်ဆက်မှု 3.6.1 (၃.၆.၁) (2011-10 / ၂၀၁၁-၁၀)
ဤထုတ်ပြန်ချက်ကို http://www.martus.org ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အင်္ဂလိပ်၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊
စပိန်နှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် တွေ.ရှိနိုင်သည်။ အခြား ဘာသာစကားများဖြင့် နောင်အနာဂါတ်တွင် ဘာသာစကားအတွဲများဖြင့်
- အိင်္ဂလိပ် မှတ်တမ်းတင်မှုအတွက် နှင့် ဖန်ပြင် အကူအညီ ရှာဖွေမှုအတွက် အသေးစား မွမ်းမံချက်များ
- ဖာစီ/ ဒါရီ အသုံးပြုသူ ကြားခံဆက်သွယ် ဘာသာပြန်ဆိုရန် နှင့် ဖာစီ/ဒါရီ README တို.၏ ထပ်ပေါင်းချက်တို.အတွက် အသေးစား မွမ်းမံချက်များ
- စပိန်ဘာသာ အသုံးပြုသူ ကြားခံဆက်သွယ် ဘာသာပြန်ဆိုရန် နှင့်ီREADME တို.၏ ထပ်ပေါင်းချက်တို.အတွက် အသေးစား မွမ်းမံချက်များ
တင်ဆက်မှု 3.6.0 (၃.၆.၀) (2011-09 / ၂၀၁၁-၀၉)
ဤထုတ်ပြန်ချက်ကို http://www.martus.org ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အင်္ဂလိပ်၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊ နှင့်
- ဖန်ပြင်ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် တွေ.ရှိနိုင်သော သက်ဆိုင်ရာအကွက်များကို စာရင်းပြုစုရန် အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သည့် အကွက်များတွင် ရိုက်သွင်းထားသော
အချက်အလက် (ကြေငြာချက် အကွက်တွင်းရှိ ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်မှ ဖန်တီးထားသော စာရင်းပြုစုချက်အတန်း)ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်း။
- ဖြန်ကြတ်ရိုက်ကူးရန်အတွက် နှင့် စာသားနှင့် အချက်အလက်ရိုက်သွင်းရန် ကြေငြာချက် ဂရစ်ကွက်များရှိ အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သည့် အကွက်များ “ရှာဖွေရန်...”
လေးထောင့်ကွက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော အလုပ်လုပ်ဆောင်နေသည့် တန်ဖိုးများကို ထပ်းပေါင်းထည့်သည်။ ဖန်ပြင်ရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှ ရှာဖွေပြီး
စာသားအကွက်များကို ရွေးချယ်သောအခါ “ရှာဖွေရန်...” ဆိုသည့် လေးထောင့်ကွက်တွင် တန်ဖိုးများနှင့် ပြည့်နှက်နေရန် အသုံးပြုသူများမှ ရွေးချယ်ထားသော
သက်ဆိုင်ရာအကွက်မှ “ဖြစ်နိုင်သော တန်ဖိုးအားလုံးကို အလုပ်လုပ်ဆောင်စေခြင်း” ဆိုသည့် အမှတ်အသားပေးရန် သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကို ရွေးချယ်နိူင်သည်။
ဆန္ဒရှိလျှင် ထိုတန်ဖိုးများအားလုံးကို ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ ကြေငြာချက်အားလုံးတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဖန်ပြင်ရှာဖွေမှုတွင် သက်ဆိုင်ရာအကွက် တစ်ခုကို
ရွေးချယ်လိုက်သောအခါ အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သည့် အကွက်များတွင်ရိုက်သွင်းထားသောအချက်အလက်အတွက် ကြေငြာချက်တွင်ထည့်သွင်းထားသော တန်ဖိုးများသည်
အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ဆောင်သည်။ အသုံးပြုသူမှ သက်ဆိုင်ရာအကွက်၏ ရွေးချယ်ထားသော ဖန်ပြင်သို့မသွားဘဲ သက်ဆိုင်ရာအကွက်၏တန်ဖိုးများကို
အလုပ်လုပ်ဆောင်စေလိုလျှင် အဓိက ဖန်ပြင်ရွေးချယ်မှုတွင် “ရွေးချယ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ အကွက်မှ ဖြစ်နိုင်သော တန်ဖိုးအားလုံးကို အလုပ်လုပ်ဆောင်စေခြင်း”
ဆိုသည့် ခလုပ်ပါရှိသည်။ (ဥပမာ- ယခင်သိမ်းဆည်းမှု ရှာဖွေချက်ကို အလုပ်လုပ်စေပြီးသည့်နောက် (သို့) အသုံးပြုသူများမှ သက်ဆိုင်ရာအကွက်၏
ရွေးချယ်ထားသော ဖန်ပြင်ရှိ အမှတ်အသားပြုရန် လေးထောင့်ကွက်ကို မရွေးချယ်ခဲ့လျှင်သောလည်းကောင်း)။ အလုပ်လုပ်သော တန်ဖိုးများအား အချက်အလက်ပါရှိသော
ဂရစ်ကွက်တွင်ထည့်သွင်းသည့် ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အက္ခရာအလိုက် စီရမည်။
- တန်ဖိုးများအား အချက်အလက်ပါရှိသော ဂရစ်ကွက်တွင်ထည့်သွင်းသည့် ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အက္ခအလိုက် စီသောအခါ ပိုမိုလွယ်ကူစေသော အချက်အလက်
ထည့်သွင်းမှုအတွက် အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သည့်အကွက်များတွင် ရိုက်သွင်းထားသော အချက်အလက် တန်ဖိုးများကို ပြောင်းလဲပေးရမည်။
- ဌာနချုပ်၏ အကောင့်များဖြင့် လက်ရှိတွင် မွမ်းမံထားသော အကြမ်းဖျင်း ကြေငြာချက်များကို ယခင်တင်ဆက်မှုများကို မပယ်ဖျက်ဘဲ ပြန်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
- ရှာဖွေမှု စံသတ်မှတ်ချက်တွင် “နောက်ဆုံး သိမ်းဆည်းသည့်နေ.”ဆိုသည့် အပိုင်း ပါရှိခဲ့လျှင် Martus မှ မမှတ်မိခဲ့သည့် သင့်၏ ယခင်ရှာဖွေမှု စံသတ်မှတ်ချက်များ
ဆိုသည့် အမှားကို ပြုပြင်ပေးသည်။
- ဌာနချုပ် အကောင့်သည် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသော သက်ဆိုင်ရာအကွက်မှ ကြေငြာချက်များကို ချိတ်ပိတ်လိုသည့်အခါ အမှားနှင့် ပတ်သက်သော မှာကြားချက်များကို
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိစေရမည်။ ဌာနချုပ် အကောင့်သည် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသော သက်ဆိုင်ရာအကွက်မှ ကြေငြာချက်များကို (တစ်ခုခြင်းဖြစ်စေ (သို့) အစုလိုက်ဖြစ်စေ)
အလိုအလျောက် မပိတ်သိမ်းနိုင်သော်လည်း ၄င်းတို့အား မွမ်းမံပြုပြင်ပေးနိုင်ပြီး ထိုမူကြမ်းများ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီးနောက်မှသာ ၄င်းတို့အား ပိတ်သိမ်းနိုင်သည်။
- Martus Search Engine (မားတပ်စ် ရှာဖွေအင်ဂျင်) အတွက် ကြေငြာချက် အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ပေးပို့ခြင်းတို့ပြူလုပ်သည့်အခါ
ပြန်သုံးနိုင်သော ဂရစ်ကွက်ကော်လန်များမှ မေ့ကျန်ခဲ့သော အချက်အလက်များကို ပြုပြင်ပေးသည်။
- ဒါရီ အသုံးပြုသူ ကြားခံဆက်သွယ် ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့်အညီ မွမ်းမံခြင်း နှင့် အာဖဂန် ပြက္ခဒိန် ရွေးချယ်မှုများကို ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်း
- ညာဘက် မှ ဘယ်ဘက်မှဘာသာစကားများအတွက် ညာဘက်အညီဖြစ်စေရန် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အောက်သို့ဆွဲချနိုင်သည့်သက်ဆိုင်ရာအကွက်များ၏ဖော်ပြချက်ကို ပြုပြင်ခြင်း။
- အသုံးပြုသူ ဖန်ပြင်များအတွက် အခြားအသေးစား ချွတ်ယွင်းမှုများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းအောင်လုပ်ခြင်း နှင့် ရှင်းလင်းခြင်း
တင်ဆက်မှု 3.5.1 (2010-11)
ဆော့ဖ်ဝဲ ဒေါင်းလုပ် စာမျက်နှာ http://www.martus.org တွင် ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤဗားရှင်းကို အဂ်လိပ်နှင့် အခြားဘာသာ စကားများးဖြင့်လည်း
ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားဘာသာ စကားများကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာပြု စာမျက်နှာ (http://www.martus.org/downloads) တွင် ဘာသာစကား
အုပ်စုအနေဖြင့် နောက်နောင်တွင် ရရှိပါလိမ့်မည်။
- အချက်အလက်ထည့်သွင်းရာတွင် ခေါင်းစဉ်များ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ထပ်နေသောကြောင့် ပြတ်သားမှုမရှိသော တန်ဖိုးများရှိသည့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော
ရွေးချယ်စရာများရှိသည့် ရွေးချယ်ရန်စာရင်းအား ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
- ယခုဗားရှင်းတွင် ရှာဖွေမျက်နှာပြင်သည် ရွေးချယ်ရန်စာရင်းအား အက္ခရာစဉ်အတိုင်း တန်းစီဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုထက်ပိုသော ပြုပြင်ချက်များတွင်
အကြောင်းအရာ တူညီ၍ တန်ဖိုးမတူညီပါက တန်ဖိုးအသစ်များသည် ယခင်စာရင်း၏ အောက်ဆုံး၌ သွားပေါ်နေမည့်အစား စုပေါင်းစာရင်းကိုသာ တန်းစီဖော်ပြသည်။
- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ ရှိသည့် ရွေးချယ်ရန်စာရင်းအား ပြောင်းလဲလိုက်သောအခါတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော စာစောင်က မသိရှိခြင်းပြဿနာအား
ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။ Martus မှ ယခုအခါတွင် သင့်အား တန်ဖိုးအသစ် သို့မဟုတ် အဟောင်းအား သုံးလိုပါသလားဟု မှန်ကန်စွာမေးပါလိမ့်မည်။
- အကြီးချဲ့ကြည့်ရာတွင် ရွေးချယ်စရာစာရင်းများရှိသော ဂရစ်များနှင့် အတန်းများအား ပူးတွဲပေးသောအခါ ထည့်သွင်းထားသောအရာများကို နဂိုမူလတန်ဖိုးသို့
ပြန်ပြောင်းပစ်သော ပြဿနာအား ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
တင်ဆက်မှု 3.5 (2010-10)
- တစ်ခုထက်ပိုသော အဆင့်များပါသည့် ရွေးချယ်ရန်စာရင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သော စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုသူအနေဖြင့်
အဆင့်မြင့်သော တန်ဖိုးများပေါ်တွင် မှီခိုနေရသော အဆင့်နိမ့်သည့် တန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ထည့်သွင်းလာနိုင်သည်။ (ဥပမာ - နေရာဒေသများအတွက် သင့်အနေဖြင့်
ပြည်နယ်နှင့် မြို့ များ ထည့်သွင်းရာတွင် ပြည်နယ်ကို ရွေးချယ်ပြီးပါက ထိုပြည်နယ်တွင်ရှိသော မြို့များကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။) ရွေးချယ်နိုင်သော
စာရင်းများအတွက် သင်ပြုလုပ်ထားသော ရွေးချယ်စရာများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့သည် သင်၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော
အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထည့်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည် ထည့်သွင်းစရာ မလိုတော့ပေ။
- ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်ထည့်သွင်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ရန်စာရင်းနှင့် စာလုံးနယ်ပယ်နေရာများတွင် ပုံသေတန်ဖိုးများအား ပြုပြင်နိုင်ခွင့်ကိုလည်း ခွင့်ပြုထားသည်။
- အန်းတားနှိပ်ကာ နောက်ထပ်အတန်းတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် တပ်(ပ) ခလုတ်နှိပ်လျှင် နောက်တစ်ကွက်သို့ မပြောင်းပါက ဂရစ်အကွက်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည့်
အချက်အလက်များအား မသိမ်းဆည်းပေးခြင်း ပြဿနာအား ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
- ရှာဖွေထားသော အချက်အလက်ပြနေရာနှင့် အစီရင်ခံစာများ၏ စာရင်းတွင် အချို့နယ်ပယ်များသည် တစ်ကြိမ်ထက်မက ဖော်ပြနေခြင်းကိုလည်း ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
- ဘင်္ဂလား၊ ဘင်္ဂလီ၊ မြန်မာနှင့် ခမာစာလုံးများအား Martus အတွင်းတွင်မြင်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်ကိုလည်း အသုံးပြုသူလက်စွဲတွင် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။
တင်ဆက်မှု 3.4.1 (2010-08)
- Martus အသုံးပြုမှု မရှိသည့်အခါတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် အချိန်ကုန်သတ်မှတ်ချိန်အား မူလအချိန်ကုန်သတ်မှတ်ချက်၁၀မိနစ်မှ ပြောင်းပေးထားသည်။
ထိုသို့ပြောင်းပေးထားခြင်းကြောင့် အများသုံးနေရာများနှင့် စုပေါင်းသုံးကွန်ပြူတာများသုံးရာတွင် ပိုမိုလုံခြုံမှု ရှိစေသည်။ ထို့အပြင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ
သုံးစွဲနိုင်စွမ်းကိုလည်း ပိုလာစေသည်။ (ဥပမာ - ဆာဗာပေါ်မှ စာစောင်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်း) Martus တွင်ရှိသော အမိန့်ပေးစာကြောင်းတွင် ပုံသေစံညွှန်းအား
ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော အချိန်ကုန်သတ်မှတ်ချက်ကြာမြင့်ချိန်ကို ပြုပြင်နိုင်သည်။ အမိန့်ပေးစာကြောင်းမှာ "--timeout-minutes=X" ဖြစ်ပြီး X သည်
မည်သည့်မိနစ်တန်ဖိုးမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - Windows (ဝင်းဒိုး)အသုံးပြုသော ကွန်ပြူတာရှိ Martus တွင် အချိန်ကုန်သတ်မှတ်ချက်အား အမြဲတမ်း
ငါးမိနစ်ဟုသတ်မှတ်လိုပါက ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင် ရှော့ကက် (Desktop shortcut)မှ အမိန့်ပေးစာကြောင်းတွင် (မောက်စ်ညာခလုတ်နှိပ်၍ Properties ကိုရွေးကာ)
C:\_Martus\_bin\_java.exe -Xbootclasspath/p:C:\_Martus\_lib\_ext\_bc-jce.jar -jar C:\_Martus\_martus.jar --timeout-minutes=5
သို့ ပြောင်းပါ။ Mac (မက်)နှင့် Linux (လင်းနစ်) စက်များရှိ Martus တွင် အမိန့်ပေးစာကြောင်းကို ပြောင်းလိုပါက အသုံးပြုသူလက်စွဲ အပိုင်း၂-ကကို ကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ်
info@martus.org သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
- အလွန်ကြီးမားသော စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် Martus ကိုနှေးကွေးစေခြင်းနှင့် ပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းများကို ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
တင်ဆက်မှု 3.4 (2010-03)
- စာစောင်ကို မသိမ်းဆည်းနိုင်မီ အချို့သော ဂရစ်ကော်လံများတွင် အချက်အလက် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်မှု စွမ်းရည်ကို ထပ်ဆောင်းထားသည်။
- ရှာဖွေ မျက်နှာပြင်တွင် အားလုံးသော ဂရစ်ကော်လံ သတ်မှတ်ချက်များသည် စာစောင်ဂရစ် အချက်အလက်၏ တန်းတစ်ခုတည်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သတ်မှတ်ရန် စွမ်းရည်
ထပ်ဆောင်းထားသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် အတွက် ရှာဖွေ မျက်နှာပြင်တွင် “ဂရစ်ကော်လံ သတ်မှတ်ချက်များ ယှဉ်တွဲပါ”အကွက်ကို ရွေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေဖြင့် ရက်စွဲတစ်ခု
ပြီးမှ ဖန်တီးထားသည့် သင့်စာစောင်မှ တန်းတစ်ခုတွင် နှိပ်စက်ခံရသူတစ်ဦး၏ တိကျသောအမည်ကို ရှာဖွေလိုပါက ထိုအကွက်ကို ရွေးချယ်ပြီး ရှာဖွေ မျက်နှာပြင်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ
နယ်ပယ် များကို ထည့်သွင်းပါ။ "နှိပ်စက်ခံရသူ၏ အချက်အလက်။ ပထမအမည်"=x နှင့် နှိပ်စက်ခံရသူ၏ "အချက်အလက်။ နောက်ဆုံးအမည်=y နှင့် "ဖန်တီးသည့်နေ့စွဲ"=`နှစ်-လ-ရက်။
အကယ်၍သင်သည် “ဂရစ်ကော်လံ သတ်မှတ်ချက်များ ယှဉ်တွဲပါ”အကွက်ကို မရွေးခဲ့ပါက Martus သည် မည်သည့်အတန်းတွင်မဆို သင်အတိအကျ ဖော်ပြသည့် ပထမအမည် ပါရှိပြီး
အခြားမည်သည့် အတန်းတွင် သင်အတိအကျ ဖော်ပြသည့် နောက်ဆုံးအမည် ပါရှိသည့် သင်သတ်မှတ်သည့် ရက်စွဲပြီးနောက်ဖန်တီးသည့် စာစောင်များကို ရှာဖွေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် တူညီသော
စာစောင်အတန်းတွင် ရှာဖွေမည် မဟုတ်ပေ။ သင့်အနေဖြင့် ပထမအမည်"=x နှင့် နောက်ဆုံးအမည်=b ပါရှိသော တန်းတစ်ခုရရှိနိုင်ပြီး ပထမအမည်"="a" နှင့် နောက်ဆုံး အမည်=y
ပါရှိသော ကွဲပြားခြားနားသည့် တန်းတစ်ခု ရရှိနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အတန်း တစ်ခုတွင် ယှဉ်တွဲရမည်ဟု အတိအကျ သတ်မှတ်မထားသောကြောင့် Martus သည် ထိုစာစောင်အား
ရှာဖွေမှုကို ကိုက်ညီမှုအဖြစ် ရှာဖွေလိမ့်မည်။)
- စာစောင် စိတ်ကြိုက်ပြုမှုတွင် Martus သည် အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသည့် ရက်စွဲတာများနှင့် ယှဉ်ကာ ရက်စွဲအားလုံးကို တရားဝင်ပြုရန် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်ကို ထပ်ဆောင်းထားသည်။
(ဥပမာ အဖြစ်အပျက်များသည် တစ်စုံတစ်ရာသော ရက်စွဲ မတိုင်မီ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာသော ရက်စွဲ ပြီးမှဖြစ်သောအဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ရက်စွဲများသည် “ယနေ့” ပြီးနောက်
(အနာဂတ်တွင်) မရှိနိုင်ကြောင်း ပြောသည့် စွမ်းရည်ပါ ပါဝင်သည်။ )သင့်အနေဖြင့် စံနယ်ပယ်များ အပြင်စိတ်ကြိုက်နယ်ပယ်များအား ရက်စွဲတရားဝင်ပြုမှု လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍
မှတ်သားထားပါ။ရက်စွဲနယ်ပယ် ခုနှစ်ရွေးချယ်မှုများသည် စိတ်ကြိုက်ပြုမှုတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုတ်မာ(hard-coded) သွင်းထားသည့် ရက်စွဲတာများကို ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
- အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်၍ “ချဲ့ထားသော စာစောင် ရာဇဝင်”ကို ရယူရန် စွမ်းရည်ကို ထပ်ဆောင်းထားသည်။ ၄င်းကို စာစောင် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စာစောင် ဗားရှင်းအသစ် ဖန်တီးသည့် ပင်မ အကောင့်သည် စာစောင်များ၏ ယခင်ရေးသားသူများ၏ ဗားရှင်းများ၏ အများဆိုင်ကုတ်(public code) နှင့် စာစောင် အိုင်ဒီများကို
ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ယခင်ရေးသားသူနှင့်စာစောင် အချက်အလက်များကို ဤ ချဲ့ထားသော ရာဇဝင်နှင့် မည်သည့် စာစောင်ကိုမဆို XML တင်ပို့မှုကို လည်း ထပ်ထည့်ထားသည်။
- Martus သည် အမြဲတမ်း ပုဂ္ဂလိက အပိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြုမှုသည် ပြောင်းလဲသွားသလား သိရှိနိုင်စေရန် လက်ရှိ စာစောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ထားပြီး အသုံးပြုသူအား
နယ်ပယ် အဟောင်း သို့မဟုတ် အသစ် သုံးလိုသလားဆိုသည်ကို မေးမြန်းသည်။
- ကွဲပြားခြားနားသည့် Martus ဗားရှင်းတစ်ခုက ဖန်တီးသည့် လိုက်ဖက်မှုမရှိသော xml ဖိုင်ကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးက တင်သွင်းရန်ကြိုးစားပါက သတိပေးစကား ထပ်ထည့်ထားသည်။
- အသုံးပြုသူ မျက်နှာပြင်အား သေးငယ်သော ဗိုင်းရပ်စ် ပြင်ဆင်မှုများ၊ ရှင်းလင်းမှုများနှင့် သန့်စင်မှုများ
- အဂ်လိပ်ဘာသာဖြင့် သုံးစွဲသူလက်စွဲကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော ဗားရှင်း
တင်ဆက်မှု 3.3.2 (2009-08)
- ဒေတာ မောင်းနှင် ဆွဲချ(data-driven-dropdown)တစ်ခုပါဝင်သည့် ဂရစ်ကို ပြိုလဲစေလျက် သို့မဟုတ် ဒေတာ မောင်းနှင် ဆွဲချ(data-driven-dropdown)
တစ်ခုပါဝင်သည့် ချဲ့ထားသော ဂရစ်တစ်ခုနှင့်အတူ စာစောင်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် ဒေတာ မောင်းနှင် ဆွဲချရင်းမြစ်(data-driven-dropdown source) တစ်ခုဖြစ်သည့်
ချဲ့ထားသော ဂရစ်အတွင်း နယ်ပယ်တစ်ခုကို တိုးချဲ့သည့်အခါ အသုံးပြုသူ ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးမှုစနစ် နှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်သွားခြင်းကဲ့သို့သော ဒေတာ မောင်းနှင် ဆွဲချများ
(data-driven-dropdowns)ပါဝင်သည့် ချဲ့ထားသော ဂရစ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပြင်ဆင်ထားသည်။(ဒေတာ မောင်းနှင် ဆွဲချသည် ချဲ့ထားသော ဂရစ်အတွင်းတွင်လည်းရှိသည်။)
- စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာများ ဖန်တီးရာတွင် စိတ်ကြိုက် လိုင်းစုံနယ်ပယ်များအား မပြသသည့် မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်မှုကို ပြင်ဆင်ထားသည်။ Martus အစောပိုင်း ဗားရှင်းများဖြင့်
ဖန်တီးသည့် စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာများသည် ပြဿနာ ရှိနေလိမ့်မည်။ပြင်ဆင်မှုကို ကြည့်ရှုရန် အသုံးပြုသူသည် အသစ်ဖြစ်သော စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာများကို ဖန်တီးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တင်ဆက်မှု 3.3 (2008-08)
- ချိတ်ပိတ်ထားသည့် မူကြမ်းများစွာကို ချက်ချင်း`စုစည်းရန်´အတွက် လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထပ်ဆောင်းထားသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် အတွက် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ပါ > ချိတ်ပိတ်စာစောင်များ ကို သွားပါ။
- ပင်မများ(Headquarters)ကို စာစောင်အုပ်စုတွင် ပေါင်းထည့်ရန် သို့မဟုတ် စာစောင်များ၏ ဖိုလ်ဒါ (folder) တစ်ခုလုံးသို့ ပေါင်းထည့်ရန် သွင်ပြင်သစ်များ ပါဝင်သည်။
ဤသို့ပြုလုပ်ရန် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ပါ> အပ်ဒိတ် ပင်မဝင်ရောက်ခွင့် ကို သွားပါ။ အနည်းဆုံးစာစောင်တစ်ခု မရွေးလျင်၊ အနည်းဆုံးပင်မ(HQ)တစ်ခု သီးသန့်စီစဉ်မထားလျင်၊ ဤရွေးစရာသည်
ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်နေလိမ့်မည်။အပ်ဒိတ် (update) လုပ်နေစဉ်တွင် Martus သည် တိုးတက်မှုပြ အကွက်တန်းကို ပြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ပယ်ဖျက်လိုလျင် ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ မူကြမ်းစာစောင်များကို
ပင်မ(HQ)၏ သတင်းအချက် အလက် များကို ထင်ဟပ်စေရန် အပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ချိတ်ပိတ်ထားသည့်စာစောင်များအတွက် စာစောင် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ချိတ်ပိတ်ထားသည့် မူသစ်တစ်ခုစီကို
Martus က အလိုအလျောက် ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
- စာစောင်များကို ကြိုတင်ကြည့်ရှုစဉ်၊ ဖန်တီးစဉ်နှင့်တည်းဖြတ်စဉ်တွင် အပြင် စာစောင်များအသေးစိတ် ကြိုတင်ကြည့်ရှုသောအခါ အတွင်း တွဲဖက် ရုပ်ပုံအမျိုးမျိုးကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် လုပ်နိုင်စွမ်းကို
- အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် (screen) ပေါ်တွင် သာမန် ကွန်ပျူတာစနစ် အမှားပြင်မှုများ၊ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် န့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်မှုများ၊
မှတ်ချက်၊ ၊ (Martus 3.1 တွင် စတင်ရရှိ နိုင်သော်လည်း အသုံးပြုသူများ လက်စွဲတွင် မပါဝင်သေးပေ။)
အကောင့်တစ်ခု တွင် စာစောင်များစွာပါရှိသောအခါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှုနှင့်သွားလာမှုကို မြန်ဆန်စေရန် ထပ်ဆောင်းထားသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ Martus ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်
ရှော့ကက် (Desktop shortcut) တွင် အမိန့်ပေးမှု (command) အဆုံးတွင်
“ --folders-unsorted” ကို ပေါင်း ထည့်နိုင်သည်။ ဤသိုပြုလုပ်ခြင်းသည် Martus ရှိ ဖိုလ်ဒါများအား စ ဖွင့်သောအခါ မရွေးဘဲထားလိမ့်မည်။ (စာစောင်များစွာကို ရွေးရန်
အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သော ကြောင့်ပင်။) အကယ်၍ ရွေးလိုလျင် စာစောင်ကြိုတင် ကြည့်စာရင်းတွင် ကော်လံ ခေါင်း (Column Header) တစ်ခုကို အမြဲနှိပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤရွေးစရာ
ပါရှိခြင်းသည် စဖွင့်စဉ်နှင့် Martus အတွင်းရှိ ဖိုလ်ဒါသစ်များကို ဝင်ရောက် သောအခါ အချိန်ကုန်သက်သာစေပါ လိမ့်မည်။
တင်ဆက်မှု3.2 (2007-09)
- စာစောင်သစ်ပြသနိုင်မှုသည် သင့်အား အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေသည်။ ၁) နေရာများစွာယူသည့် ရှည် လျားသောနယ်ပယ်များ အတွက် စာစောင်တွင်းရှိ နယ်ပယ်များကို ဝှက်နိုင်/ဖော်နိုင်စေသည်။
၂) သင် ဝှက်နိုင် /ဖော်နိုင်သည့် စာစောင်များထဲတွင် အပိုင်းများဖန်တီးနိုင်သည်။ ၃)ချဲကားထားသည့် မြင်ကွင်းထဲ တွင် ဂရစ်ကွက်များကို ပြနိုင်သည်။(ထိုမြင်ကွင်း တွင်းမှ အတန်းများပေါင်းထည့်နိုင်မှုအပါအဝင်)
၄) တန်းတစ်တန်း ပေါ်တွင် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကပ်လျက် နယ်ပယ်များ ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ၅) နေရာယူမှု သက်သာရန် ပုံမှန်ထား ဂရစ်ကွက်များ၏ အရွယ်ကို လျော့ချနိုင်သည်။
- စာစောင်တစ်ခုကို မသိမ်းဆည်းနိုင်မီတွင် အခြားသောနယ်ပယ်အချို့ကို ဝင်လာစေရန် လိုအပ်သည့် ထပ်ဆောင်းလုပ်နိုင်စွမ်း၊
- စာစောင်ထဲတွင် ဆွဲချနယ်ပယ်ရှိ တန်ဖိုးများးသည် အခြားနေရာရှိ နယ်ပယ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည့် ဒေတာ (data) ပေါ်တွင် အခြေခံထားသောနေရာတွင် ဒေတာ(data) ကမောင်းနှင်သည့်
ဆွဲချများကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအား မိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ ဒေတာ(data) ရင်းမြစ်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆွဲချသည် ဂရစ်ကွက်နယ်ပယ် အတူတူထဲတွင် မရှိနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
- ရှာဖွေမှု တိုးတက်မှု အခြေအနေပြ ဒိုင်ယာလော့ခ်နှင့် ရှာဖွေမှုများကို ပယ်ဖျက်နိုင်စွမ်း ထပ်ဆောင်း ထည့်ထား သည်။
- ရှာဖွေမှုများအတွက် တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အခြားသော စာစောင်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ အထူးသဖြင့် စာစောင်များစွာရှိသည့် အသုံးပြုသူများအတွက်
- အောက်ပါတို့အပါအဝင် ပြသနာရပ်များစွာကို ပြုပြင်ပေးထားသည်။ ၁) စာစောင်စိတ်ကြိုက်ပြုမှု များစွာရှိသည့် အသုံးပြုသူများအတွက် သီးသန့်စီစဉ်ထားရှိသည့် နေရာချထားမှုများ (ဥပမာ ပင်မများ(HQs))
ကို သိမ်းဆည်းမည် မဟုတ်ပေ။၂) စာစောင်များကို ဆာဗာတစ်ခုသို့ ပေးပို့စဉ်တွင်/ဆာဗာတစ်ခုမှ ပြန်လည်ရယူစဉ်တွင် ဆွဲထည့် ရာ၌ဖြစ်ပေါ်သောအမှားများ။
- အသုံးပြုသူများအတွက် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် သတင်းစကားများ (ဥပမာ စိတ်ကြိုက်ပြုမှု အ မှားများ)
- အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် ပေါ်တွင် သာမန် ကွန်ပျူတာစနစ် အမှားပြင်မှုများ၊ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်မှုများ၊
တင်ဆက်မှု3.1 (2007-04)
- နယ်ပယ်စာစောင်များ ပြန်လည်ရယူရန်ရှိပါက လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်က ပင်မများ(HQs)ကို အသိပေး အကြောင်း ကြားသည်။ Martus အကောင့် တွင် ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်
ရွေးချယ်ရန် အခွင့်အလမ်းများ > စိတ်ကြိုက်အနေအထားများ ကို သွားပါ။ "(စာစောင်သစ်များကို အလိုအလျောက် စစ်ဆေးပါ )" ကို ရွေးပါ
။ တစ်နာရီ တစ်ခါါနီးပါး အခြေအနေပြ အတန်း ကွက်ထဲတွင် (ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်၏ ဘယ်ဘက် အောက်ဘက် ထောင့်တွင်) Martus က စာစောင်သစ်များကို စစ်ဆေးနေသည်ဟူသော
နယ်ပယ်စာစောင်များ ပြန်လည်ရယူရန်ရှိပါက အခြေအနေပြ အတန်းကွက်သည်နောက် သတင်းစကား တစ်ခုကို ပြပါလိမ့်မည်။ထိုအချိန် တွက် ပြန်လည်ရယူ မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ရန်
ဆာဗာမီနူး(server menu) ကို သွားနိုင် ပါသည်။
- ကော်လံခေါင်းများကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရယူ မျက်နှာပြင်တွင် စာစောင်များကို ရွေးနိုင်စွမ်း ထပ်ဆောင်း ထားသည်။ ရွေးယူနိုင်မှုမှာ အတက်အတွက်သာဖြစ်သည်။
- စာစောင်များစွာရှိသည့် အသုံးပြုသူများအတွက် Martus ကို လော့အင်ပြုလုပ် ဝင်ရောက်သည့်အခါ
နှင့် ထွက်သည့်အခါဖြစ်ပေးနိုင်သည့် မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်အောင်
- version 3.0 တွင် စတင်အသုံးပြုထားသည့် အောက်ပါတို့ အပါအဝင် ကွန်ပျူတာစနစ် အမှားပြင်မှုများကို
၁) စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာများတွင် နေ့စွဲတာ နယ်ပယ် မပေါ်လာခြင်း
၂) Martus မှထွက်သည့်အခါ ပုဂ္ဂလိကအပိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြုမှု ပျောက်ဆုံးခြင်း
၃) Mac ပေါ်တွင် ဖိုင်ရွေးချယ်ရေး ဆိုင်ရာများ(ဥပမာ ပင်မများ(HQs)ကို သီးသန့်စီစဉ်ထားရှိခြင်း၊ (Key)
သော့ကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုမှု ပုံစံပြားကိုပို့ ခြင်း
၄) စာစောင်အသေးစိတ်များ နှင့် အနှစ်ချုပ်ရေတွက်မှုများကို အစီရင်ခံရာ တွင် တသမတ်တည်းမရှိသည့်
အာရပ် ရက်စွဲ ပြသမှု၊
- အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သာမန် ကွန်ပျူတာစနစ် အမှားပြင်မှုများ၊ ရှင်းလင်းချက်များနှင့်
တင်ဆက်မှု3.0 (2006-09)
- ထပ်ဆောင်းထားသည့် အစီရင်ခံနိုင်စွမ်း ရှာဖွေစံတစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီသည့် စာစောင်အတွက် ရလဒ်ပြသမှုကို အစီရင်ခံပြီး၎င်းကို ပုံနှိပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖိုင်တစ်ခုတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
အစီရင်ခံစာသည် စာစောင်နယ်ပယ်၏ အဖွဲဝင်ခွဲများ ပါဝင်နိုင်ပြီး စာစောင်တစ်ခုစီအတွက် တန်းတစ်ခု ပါသည့်ဇယားအဖြစ် ဖောမတ် (format) ချနိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာကို နယ်ပယ်များစွာဖြင့်
အုပ်စုတစ်ခုစီတွင် စာစောင်များ၏ အနှစ်ချုပ် ရေတွက်မှုဖြင့် ရွေးနိုင်သည်။
- အောက်ခြေ၏ ဖောမတ် (format) / စာစောင်၏ ပုဂ္ဂလိက အပိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်မှု ထပ်ဆောင်းထား သည်။
- ထည့်သွင်းနိုင်မှုအသစ်က အသုံးပြုသူများအား Martus စာစောင်ဖောမတ်အတွင်းသို့ စာသားများနှင့် တွဲဘက်ဖိုင်များအ ပါအဝင် အီလက်ထရွန်းနစ် သတင်းအချက်အလက်များ ပို့ရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။
အပြင်သို့ ပို့မှုကိုလည်း အတွင်းသို့ပို့မှု တည်ဆောက်ပုံနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အဆင့်မြှင့်ထားပြီး ယခုအခါတွဲဘက်ဖိုင်များကို အပြင်သို့ပို့ခွင့်ပြုသည်။
- ရှာဖွေနိုင်မှုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းသည် နယ်ပယ်ရွေးစာရင်းတွင် တူသောနယ်ပယ်များကို ပေါင်းစည်း စေလျက် စိတ်ကြိုက်ဂရစ်ကွက် တစ်ခုအတွင်းရှိ သီးသန့်ကော်လံတစ်ခုပေါ်တွင် ရှာဖွေနိုင်စွမ်းနှင့်
နယ်ပယ် များစွာ တွင် အမည်ပေးထားမှုတူညီနေလျင် ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်သည်။
- စာစောင်ရှိ မူသေထား (default) နှစ်ကို လက်ရှိနှစ်အစား " အမျိုးအမည်မသိ (Unknown)" ဟု ပြောင်းထားသည်။
- စာစောင်များစွာရှိသည့် အကောင့်များအတွက် ထူး ခြားသိသာသော စွမ်းဆောင်ရည် အထူးသဖြင့် ပြန်လည် ရယူမျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ခြင်း။ ကြာရှည်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်မှုများအတွင်း
အသုံးပြုသူများအတွက် ထပ်ဆောင်း အခြေအနေပြ သတင်းစကား။
- အသုံးပြုသူများအတွက် ထပ်ဆောင်းသတင်းစကားများနှင့် လိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင် ရှည်လျားသည့် စိတ်ကြိုက် နယ်ပယ် တံဆိပ်များပြသခြင်းတို့ပါဝင်သည့် စိတ်ကြိုက်ပြုမှု တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
Version 2.9.0 2006-03
- As of 2.6 Server release (March 2006), sped up several
major client/server operations. Specifically, the following
operations are now faster: uploading/sending bulletins,
retrieving your own bulletins or field office bulletins,
initialization when connecting to the server at account login.
- Performance improvements for accounts withalarge number of
bulletins. Impacts the speed of the following actions:
display of folders/sorting/moving bulletins etc
- Changed Retrieve operations so that they happen in the
background (similar to sending bulletins toaserver), so that
you can continue to work in Martus while that is happening
without waiting for the retrieval to finish. When it is
complete, bulletins are displayed in the appropriate
"Retrieved" folder. To cancelaRetrieve, go back into the
- Improved messages to the user about server status.
- Added the ability to search on columns withinagrid (instead
of the entire text of the grid) when specifying field in an
Advanced Search, and added the option to search only on the
most recent version of bulletins.
- Fixed search bugs introduced in 2.8 and 2.8.1. Specifically,
addressed incorrect search results on dropdown fields with
spaces in the choice values, and incorporated the
customization tags in the search field list where labels were
left blank (e.g. for section headers) so that there are no
empty values in the field list.
- Added ability to insert and delete rows in customized grids
and search screen
- Use all available screen space when displaying bulletin data
and the Contact info dialog.
- Moved "Resend Bulletins" to be under the Server menu (for HQs
that back up bulletins to servers for field offices that do not
have access to the internet)
- Removed misleading "not all bulletins were retrieved"
messages that appeared whenaHQ account did not have
permission to view old versions of certain bulletins
- Several updates to date preferences: localization of date
formats, additional format choices, changes to correctly
display (and convert previously entered) Thai and Persian
dates. Persian dates useawell-known arithmetic algorithm
for calculating leap years. Also created tool to help diagnose
- Made change to help word processing programs correctly
display accents in html report files.
- Added Kurdish to the language dropdown list. If you need
help with the display of Kurdish fonts in Martus, please
contact help@martus.org .
- Initial implementation of data import tool to allow
conversion of electronic text files (in .csv or .xml format)
to Martus bulletin format. This initial version does not
handle import of customized grids or attachments, but will
handle all other field types. For instructions/help on
running this utility, please contact help@martus.org .
- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to
the user screens.
Version 2.8.1 2005-11
- Fixedaproblem introduced in version 2.8 where dates and
date ranges with values earlier than January 1st 1970 were
displayed, and could be stored, incorrectly.
- Incorporated Thai and Russian 2.8 software user interface
Version 2.8.0 2005-09
- Added ability to create grid columns of different types
(drop-down lists, checkboxes, dates, and date ranges)
- Advanced search capability now allows users to specify
particular fields in which to search (including custom fields),
in addition to searching the entire text of bulletins. Searches
can combine searches in different fields using and/or options.
- Enhanced printing functionality to be able to print multiple
selected bulletins at once
- Added ability to save selected bulletin(s) toahtml text file,
with option to include or exclude private data
- Createdanew "Organize Folders" menu option to allow users to
put folders in any order
- Added warnings to users if the translation they are running is
not the same version as the software, and display the date of
any language packs in the About box
- Bring up Martus logo as soon as program is started so users know
that it is loading
- Updated encryption libraries to use Bouncy Castle Java
- Additional improvements to display and printing of right-to-left
- Incorporated system fonts for menu display of certain languages
- Changed bulletin behavior so that modifications to drafts pick
up newly configured Headquarter and customization settings
- As of the 2.4 Martus Server release, added ability for Martus
Client users to receive news fromaMartus backup server when
they connect (e.g. messages about new versions available for
download, or server maintenance downtime)
- Modified method of verification for downloaded files from MD5
- Updated English user documentation (Quick Start and User Guides)
- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the
Version 2.7.2 2005-08
- Removed incomplete/inaccurate Nepali 2.0.1 software user
interface translation, and placed an updated Nepali language
pack on https://www.martus.org/downloads. This language pack
includes Nepali translations of the software user interface
(usable for versions 2.5 and later, with 90% of the strings
translated into Nepali), in-program help (version 2.0.1),
Quick Start Guide (version 2.0.1), User Guide (version 2.0.1),
and README file (partially translated up to version 2.6).
In Windows, to run Martus in Nepali for version 2.7.2 and earlier
so that all the menus will show up correctly, you must makeaminor
modification to the command used to start Martus (from the command
prompt, and in any desktop/Start Menu shortcuts or aliases that were
created when you installed).
To run from the command line, go to your Martus directory and type:
To change your shortcuts, right-click on them, choose Properties,
and change the Target command to:
Version 2.7.0 2005-04
This release is only available in English and Persian.
Other languages will be available in the future, as language-packs
on the documentation page (https://www.martus.org/downloads)
- Added ability to create single custom field "drop-down"
lists (not withinagrid)
- Added ability to create custom field "messages" to give
guidance on how to enter data, and to create comments/notes
that will be displayed in every bulletin (e.g. on-screen help)
- Added ability foraHeadquarters account to export customization
templates to give to field users, or users to export their own
templates. Users can then import customization settings from a
choice of templates.
- Each configured Headquarters account can now be enabled or disabled
for each bulletin that is created or modified. Users can also
designate certain Headquarters accounts to be assigned to all
newly created bulletins by default.
- Searches now scan previous versions of each bulletin in addition
- Additional improvements to display of right-to-left languages
- Persian translation of user interface included
- Export to XML now includes custom field type
Version 2.6.0 2005-02
- Users can now search and view the full contents of all
versions of sealed bulletins stored on their computer, by
clicking on the Bulletin Details button.
- Added ability to choose whether to retrieve all versions or
only the most recent version ofasealed bulletin from the
server. Users with small disk drives or slow internet
connections may choose to only retrieve the most recent
version for large bulletins.
- Attachment filenames are now included in searches.
- Changed XML export functionality to further support custom
fields and sealed bulletin versions.
- Enhancements to display of Right-to-Left languages (e.g. Arabic)
- Inclusion of Arabic User Guide and Quick Start Guide.
- Several minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the
- There may be issues with the display of some screens when running
Martus 2.6 in Arabic inaMac OS.
Version 2.5.0 2004-11
- Added ability to create new versions of sealed bulletins so
that changes or additions can be made to previously sealed
bulletins. In this release of Martus you will only be able
to search and view the full contents of the most current
version (you will be able to view the title/bulletin-id/
saved-date of any previous versions that are stored on your
computer, by clicking on the Bulletin Details button).
- Added ability to install new and updated translations at
any time followingafull Martus release. A Language pack
for each language (including English) can contain the Martus
Client User Interface translation, the User Guide, QuickStart
Guide, README file, and online help. Language packs will be
made available for download on the Martus website.
- Several changes were made to increase speed when managing
bulletins and folders (e.g. sorting, moving bulletins)
- Enhancements to custom field functionality (e.g. grid column
- Thai translation introduced
- Arabic translation introduced
- Changes made to appropriately display Right-to-Left languages
- Several improvements to display of the Martus Client User
Interface in Linux.
- Fixedaproblem when retrieving or importing bulletins with very
large attachments that could cause Martus to exit with an
"out of memory" error. Any attachment smaller than 20 megabytes
is unlikely to trigger this error.
- There may be issues with the display of some screens in the
Martus 2.5 installation program when using the Nepali or Thai
language. Because it is difficult to test this on all versions
of Windows in those languages, we would appreciate any feedback
on display of those languages when installing Martus.
Version 2.0.1 2004-08
- Addedahorizontal scroll-bar for custom field grids that are
wider than the screen width.
- French translation introduced
- Russian and Spanish User documentation updated with 2.0
- Minor clarifications and clean-ups to the English User
- Installer changes to deal with upgrade issues in non-English
- Addition of multi-file (floppy) option on download site
Version 2.0.0 2004-07
- You can now have multiple Headquarter accounts, and there is
an enhanced interface to set them up. This is particularly
useful if you want multiple people in your organization to
review your bulletins.
- Headquarters accounts can now send bulletins toaserver on
behalf ofafield desk that lacks internet access.
- Custom Fields functionality has been extended so that you can
now create custom fields of different types (e.g. date, grid,
- We are usinganew open source Windows installer (NSIS) which
can be run in non-latin alphabets.
- A new "Saved Bulletins" folder replaces the Outbox, Sent
Bulletins and Draft bulletins folders
- Each bulletin list now displaysacolumn showing whether or
not the bulletin was successfully sent to server or not
- The dateabulletin was last saved is now displayed in
bulletin preview lists and in the bulletin header
- When creating/modifyingabulletin, the "Send" button has
been changed to "Save Sealed"
- The Martus 1.5 Quick Erase functionality has been replaced by
two menu items: "Delete My Data" which removes this account's
bulletins and key pair; and "Delete All Data and Remove Martus"
which uninstalls Martus and removes the entire Martus directory
including other accounts' data this is meant to only be used
- Enhanced key backup functionality - you do not have to do a
backup before you have created any bulletins, but are reminded
to backup your key atalater point if you have not done so.
- For bulletin searching, the user can use either English 'and'
and 'or', or the translated equivalents. This allows users who
do not have access to native-language keyboard to still perform
'and' and 'or' searches.
- A new "Bulletin Details" button showsaunique bulletin-id and
the Headquarters accounts that can view the private data in
- When printing, you now have option to hide or include private
- Online help is now searchable
- You can setaflag to disallow public bulletins for security
- Improvements to folder renaming functionality
Version 1.5.0 2004-02
- Multiple accounts can now be set up onacomputer. This
changes the login screen in several ways: You haveachoice
between signing in to an already setup account, creating a
new account, or restoring fromakey pair backup. There will
beasub-directory for each account under the Martus directory.
- The ability to select the language in which you want to run
Martus is now available on the signin screen.
- Improved key pair backup functionality, and the ability to back
up into multiple "secret share" files to be distributed to friends.
- Extended Quick Erase functionality to allow removal of key pair,
scrubbing of bulletin and key pair data before deletion, and the
ability to complete the Quick Erase operation and exit Martus
- A new Tools Menu (for Quick Erase, key pair, and HeadQuarters
- Improved communication with Martus backup servers, and clearer
messages to user about server status
- Additional language options added to bulletin selection list
- A bug was fixed that prevented previous versions of the Martus
program from successfully retrieving bulletins fromabackup
server if the bulletins contained public information with
non-English letters. This bug did not affect the ability for
bulletins to be securely backed up toaMartus server. The
problem would only be noticed if the bulletins were not present
on your machine, and you tried to retrieve your own or your
field office sealed bulletins containing non-English language
public data (the message received in this case was "Errors
occurred while retrieving bulletin summaries. Some of the
bulletins on the server will not be shown.") The bug did not
affect the retrieval of all-private or draft bulletins. You
must also be accessingaproduction Martus backup server, or
upgrade your own server to run Martus Server Software version
2.0 or later, to be able to retrieve bulletins with non-English
language public data.
- Update to Java version to 1.4.2_03
Version 1.2.1 2003-12
- Russian version introduced, including special version of
Russian install program.
- English and Spanish User Guides updated with 1.2 functionality
- LinuxJavaInstall.txt script created to simplify Java
installation on GNU/Linux machines.
Version 1.2.0 2003-09
- You can now customize the fields of all subsequently created
bulletins. Customizing fields is currently only intended to
be used by "advanced" users. When you choose that menu option,
you are warned about this, and told that if you don't know what
you're doing, you should turn back or risk messing up your
system. When you do get there, you're provided withalist
of the existing standard field tags, separated by semi-colons.
You can remove any of those, except for four "required" fields:
entrydate, language, author, and title. You can change the
sequence. You can also insert your own new custom fields.
Each custom field must havea"tag", which isastring of
lower-case ASCII letters, followed byacomma, followed by the
prompt that will be shown on screen, which can contain mixed
case letters and spaces. If you try to saveacustom field
definition string that violates any of the rules, you'll be
told that it is invalid, but you currently are given no
indication of which rule you have broken.
- You now have the option of enteringadate range (a time
period between two dates), for the bulletin event date.
- Russian UI added, with over 90% of the messages translated
- You can now specify an entire folder for export.
- If the normal Martus ports are not available for
communication withabackup server because of problems such
as firewall configuration issues, the Martus program falls
back to using ports 80/443.
- The usability of the keypair backup process has been improved.
- CD image and full download includeanewer version of Java,
user interface, including more support for mouseless operation.
Version 1.0.3 2003-05
- Release Linux and Mac compatible Martus versions.
- If you have installedaprevious version of Martus software,
you can downloadasmaller version of Martus software
without having to download the full, larger file containing
all of Java.
- Bulletins may be exported from the program in an XML text
- Check for compatible Java version during installation and
- Improve speed of manipulating bulletins with attachments.
- Change to busy-cursor during time consuming operations.
- You can now view attachments when running in Windows.
- Changes to the GNU GPL compatible license agreement, relaxing
user-notification requirements when borrowing code for uses
unrelated to Martus software, and extending coverage to
Martus server applications.
- You are now able to receive messages fromaMartus server,
includingaserver compliance statement.
- There'sanew Welcome dialog that appears when you start
the program, indicating whether this is an official version
- Simplify Martus software installation when downloading the
install program. The Jar verification program is now available
- A new Quick Erase feature will delete all local copies of
bulletins from your hard drive.
- Fixedabug whereabulletin could become corrupted if you
retrieved it fromaserver and then modifiedacopy of it by
addinganew attachment.
- Updated some Spanish translation strings.
- Fixedaproblem with the window needing the current focus
when the user times out.
- Force the signin dialog to be the top window, and add it to
- Hide main window during editing.
- Include an updated crypto library, andanew version of Java,
v 1.4.1_02, that supports entry of foreign characters using
the numeric keypad and fixesamemory leak that gradually
depletes available memory.
- Add standard Windows hot keys in obvious places, such as del,
and control- C, X, V, and A.
Version 1.0.2 2003-02
- When you choose to modifyasealed bulletin it makesacopy
of the bulletin, but if the original had attachments, the
system could become confused and end up damaging the copy,
the original, or both. This has been fixed.
- Allow CD distribution of default contents that can pre-
populate the Details field of every bulletin. If
DefaultDetails.txt is on the CD it will be copied to the
Martus directory upon installation. Then, if
DefaultDetails.txt is found in the Martus directory when
a new account is created, it will give the user the
opportunity to use this as their default Details contents
for any bulletins they create.
- Reorganize code and internal package structure for easier
Version 1.0.1 2003-01
- Ask during program installation if the user wants the Martus
program, the Martus uninstall, and the documentation files
added to the Windows Start menu.
- Update from Java Runtime Environment version 1.4.1 to
version 1.4.1_01, gaining minor Java security improvements.
- Make sure all required third party sources, third party
runtime licenses, documentation files, and Winsock programs
for Windows 95, are copied to the hard drive during
- Correct errors in the About Box and the documentation's